Khaladaadka of Crypto Investors. Error 5 - Blockchain News
Wadahadal ee ganacsiga margin
ganacsi yarna waa mid ka mid ah ugu faa'iido, laakiin waqti isku mid ah xeeladaha ugu khatar ah ee ganacsatada crypto. Qorshahani waxa uu ku habboon yahay oo kaliya ciyaartoyda qibrada leh oo diyaar u ah in ay la kulmeyso khasaaraha dhaqaale waaweyn.
In ganacsiga margin, cryptotrader qaato amaah ka Somailand, in oo wejigiisa sarrifka inta badan waa amaah ah, by bixinta qadarka dammiin ah – goolasha ay. Isla mar ahaantaana, dulsaarka ayaa lagu eedeeyay isticmaalka amaahda. Sayidka, cryptotrader ah maal galin kartaa cryptocurrency a ka badan dheelitirka.
Waxaa jira laba kala duwanaansho weyn ee ganacsiga margin: waa meel dheer, ama kulan kor loogu qaadayo, marka ganacsade u damiyaan xaqiiqda ah in hantida crypto kori doono qiimaha, iyo meel gaaban, ama ciyaar dhicidda a, marka heerka tagaa xaqiiqada ah in qiimaha for cryptocurrency yaraan doonaa. Si kastaba ha ahaatee, haddii qiimaha hantida a crypto si dhab ah hoos u dhaco halka Ganacsi oo ku badanaya, ka dibna marka uu soo gaadho a dhibic muhiim gaar ah, ganacsade waayi kartaa oo dhan ee uu deposit sabab u margin call – xiritaanka qasbay by Somailand ee macaamil, haddii ganacsade ah ayaa lacag aan ku daray in ay xisaabta. Haddii lacag u amaahannay waa halis, dhaafsiga xaq u leeyahay inuu ka jarto khasaaraha ka deebaajiga of account margin ganacsade ee.
Waxaa jira xaalado marka ganacsatada, kuwaas oo markii ugu horeysay lahaa in ay la kulmaan khasaare halis ah, go'aansato inaad kor heerarka iyo ku guuleysto dib ay halkii khasaaraha aqbalayaan. Taas oo inta badan keenta in khasaare weyn.
Khaladaadka of Crypto Investors. Error 4 Khaladaadka of Crypto Investors. Error 1
Qor: Richard Abermann
Argentina ugu dhakhsaha badan b laga yaabaa ...
cryptocur caan ...
qorshayaasha magaalada New York ...
Post Previous:Khaladaadka of Crypto Investors. Error 4
Post Next:xarunta cusub ee Quebec bilaabmaa howlo macdan Seeraar
inovat ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 21, 2018 at 2:22 AM
Bisignan ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 29, 2018 at 2:15 AM
Lawran ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 30, 2018 at 6:11 PM
Kaup ayaa sheegay in:
Darm ayaa sheegay in: